XMode | मार्फत जेलब्रेक बिना MAME4iOS स्थापना गर्नुहोस् आईफोन समाचार
Xcode को साथ जेल ब्रेक बिना MAME4iOS स्थापना गर्नुहोस्
पाब्लो अपारीसियो | | आईफोन खेलहरू, ट्यूटोरियल र म्यानुअल
Someone ० को दशकदेखि आर्केड मेसिन खेल्ने कोहीको रूपमा, अनुप्रयोगहरू मध्ये एक जुन म IOS उपकरणहरूमा सधै चाहन्छु इम्युलेटर हो MAME4iOS। २०१२ मा, ग्रिडली, एक निर्दोष (र खराब) खेलको छद्म अनुकरणकर्ता, एप स्टोरमा अपलोड गरियो तर अपेक्षित रूपमा, एप्पलले यसलाई स्वीकार गरेको केही घण्टामा हटायो। म किन सम्झन सक्दिन, तर मैले .ipa फाईल गुमाएँ, त्यसैले म फेरि स्थापना गर्न सक्दिन। त्यसबेलादेखि, यदि म MAME2012iOS खेल्न चाहन्छु भने मैले जेलभ्रेक प्रयोग गर्नुपर्दछ वा इन्टरनेटमा सर्च गर्ने विभिन्न संस्करणहरू मध्ये एक स्थापना गर्नुपर्दछ (र प्राय: कार्य गर्दैन)।
मैले प्रोजेक्टलाई अस्पष्ट रूपमा केहि समयदेखि पछ्याइरहेको छु र यसको सिर्जनाकर्ता, सेल्युकोले यसलाई पन्छाएको जस्तो देखिन्छ। राम्रो समाचार यो छ कि लेस्बर्डले सेलेको प्रोजेक्टलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। मैले भर्खरै MLAY4iOS मा एक अपडेट अपलोड गर्‍यो बिना जेलब्रेक बिना प्रयोगको लागि, तर यसले नयाँ उपकरणहरूमा काम गरिरहेको थिएन IOS .9.2.1 .२.१। आज उसले समस्या सुधार गर्दै एक संस्करण जारी गरेको छ र हो, यसले काम गर्दछ! यस गाईडमा हामी तपाइँलाई तपाइँको उपकरणमा MAME4iOS कसरी स्थापना गर्ने भनेर देखाउनेछौं, कुनै ब्रेक छैन र तपाईंको हस्ताक्षरको साथ, त्यसकारण, जबसम्म एप्पलले तपाईंको प्रमाणपत्र खारेज गर्दछ, केहि असम्भव कुरा किनभने यो कर्पोरेट छैन, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं आफ्नो उपकरण पुनर्स्थापना गर्नुहुन्न।
1 जेलब्रेक बिना MAME4iOS कसरी स्थापना गर्ने
1.1 पूर्व शर्तहरू
2 कसरी MOM4iOS मा ROM थप्ने
जेलब्रेक बिना MAME4iOS कसरी स्थापना गर्ने
लिंक गरिएको विकासकर्ता खाताको साथ Xcode। यदि तपाईंलाई कसरी थाहा छैन भने, भ्रमण गर्नुहोस् यो लिंक.
MAME4iOS कोड जुन तपाईं बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ लेस्बर्ड पृष्ठ। वा क्लिक गरेर यहाँ.
यो गाह्रो लाग्न सक्छ, तर तपाईं यो कसरी छैन देख्नुहुनेछ। नडराउनुहोस्, किनकि तपाईं कुनै खतरामा हुनुहुन्न। यो यी चरणहरू पालना गरेर हासिल गरिन्छ:
हामी लेसबर्ड पृष्ठबाट डाउनलोड गरेको फाईल अनजिप गर्छौं।
हामीले त्यहाँ सिर्जना गरेको फोल्डर भित्र एक फाइल भनिन्छ libmamearmv7.a। हामी त्यो फाईल अनजिप पनि गर्छौं र त्यसलाई उही फोल्डरमा छोड्दछौं (त्यो हो, फाइलको छेउमा) libmamearmv7.a).
यसले libmamearm7.a फाइल अनजिप नगरीकन मेरो लागि काम गरेको छैन
हामीले Xcode खोल्यौं।
मेनूमा जानुहोस् फाईल / खुला र फाईल चयन गर्नुहोस् MAME4iOS.xcodeproj के मार्ग मा छ / MAME4iOS रीलोडेड / Xcode / MAME4iOS.
खोल्ने विन्डोमा, हामीले तीन चरणहरू लिनुपर्दछ:
MLAY4iOS कम्पाइल गर्नुहोस्
हामी उपकरण छनौट गर्छौं जुनमा हामी MAME4iOS स्थापना गर्न चाहन्छौं।
हामी परिचयकर्ता परिवर्तन गर्दछौं। यो गर्नका लागि हामीले नाम "com" बिच बदल्नु पर्छ। र ".mame4ios"। मेरो केसमा मैले यसलाई "SrAparicio" नाम दिएँ।
र ट्याबमा टोली हामी हाम्रो विकासकर्ता खाता थप्छौं जुन हामीले पहिले / पहिलेको शर्तमा वर्णन भए बमोजिम सिर्जना गरेका हुनेछौं।
अर्को चरण भनेको प्ले त्रिकोणमा क्लिक गर्नु हो। यो माथिको छविमा चरण १ को बाँयामा छ।
हामी हाम्रो औंलाहरू क्रस गर्छौं र आशा गर्दछौं कि हामीमा कुनै त्रुटिहरू हुँदैनन्।
यदि सबै कुरा राम्रो भयो भने, हामी यसमा मामे i आईओएस देख्नेछौं गृह स्क्रिन हाम्रो आईफोन, आईपड टच वा आईप्याडको जस्तै अन्य अनुप्रयोग जुन हामीले अनुप्रयोग स्टोरबाट डाउनलोड गरेका छौं। अब एउटा अन्तिम चरण हराइरहेको छ (जुन शमूएलले मलाई सम्झना दिलायो। धन्यवाद): यो हाम्रो उपकरणलाई विकासकर्तालाई विश्वास गर्न भनिरहेको छ जसले अनुप्रयोग स्थापना गरेको छ। सेटिंग्स / सामान्य / उपकरण प्रबंधन र हामी आफैंलाई विश्वास गर्छौं जुन हाम्रो ईमेलमा प्रोफाईलमा हुनेछ। यो चरण मात्र पहिलो पटक गरिन्छ जब हामी Xcode को साथ एक अनुप्रयोग डम्प। अब, रमाइलो गर्न।
कसरी MOM4iOS मा ROM थप्ने
तपाईंले पहिल्यै कल्पना गरिसक्नु भएको जस्तो, हामी खेल प्रदान गर्नका लागि वेबसाइटहरू प्रदान गर्न सक्दैनौं न त खेल आफै। सबैजनासँग आफ्नो ब्याकअप सुरक्षित गर्नुपर्दछ, मेरो केसमा मसँग आईफोन वा आईप्याडमा चाहिने खेलहरूसँगै मैले एउटा फोल्डर पनि तयार पारेको हुन्छ।
ROMs MAME4iOS मा थप्न धेरै सजिलो छ। तल तपाईले बुझाउनु भएको छ कि कसरी आईट्यून्सको साथ खेलहरू थप्न तर तपाईले यकिन गर्नुभयो iFunbox र iExplorer का साथ काम गर्दछ। हामी यसलाई निम्न अनुसार गर्नेछौं:
तार्किक रूपमा, हामी आइट्यून्स खोल्छौं।
आईट्यून्समा, हामी steps चरणहरू लिनेछौं:
हामी उपकरणको आकारको आइकनमा क्लिक गर्छौं र हाम्रो आईफोन, आईपड टच वा आईप्याड छान्छौं।
बाँयामा, हामी अनुप्रयोगहरू क्लिक गर्दछौं।
दाँयामा, हामी तल स्लाइड गर्दछौं र MAME4iOS खोज्दछौं। यहाँ तपाइँले यो दिमागमा राख्नुपर्दछ कि यो अनुप्रयोगहरूको दोस्रो स्तम्भ हो, जहाँ यो भन्छन् तल साझेदारी गरिएका फाईलहरू जहाँ हामी केही अनुप्रयोगहरूमा कागजातहरू थप्न सक्छौं।
अन्तमा, हामी ROM हरूलाई बायाँको दायाँ तान्दछौं।
अब हामी आईफोनमा जान्छौं, हामी MAME4iOS खोल्छौं र खेलहरू स्वचालित रूपमा लोड हुनेछन्। अर्को पटक हामी आईट्यून्समा रॉम लोड गर्न जान्छौं कि हामी अन्य हराइसकेका छौं, तर यो सामान्य छ। तिनीहरू वास्तवमा केवल सम्बन्धित फोल्डरमा सारिएको छ।
र यो हो। क्लासिक आर्केड खेलहरूको मजा लिनुहोस्। अह, यदि एक असफल भयो भने, तपाईंले गर्नुपर्दछ केहि BIOS थप्नुहोस्, जसको लागि तपाईंले इन्टरनेट खोजी गर्नुपर्नेछ, जस्तै «mame all bios something। यदि केहि तपाईंको लागि काम गर्दैन भने, टिप्पणी गर्न संकोच नगर्नुहोस्। म विकासकर्ता होइन, र यस परियोजनासँग मेरो कुनै सरोकार छैन (म यसलाई अनुवाद गर्न सक्छु, हो), तर यसले मेरो लागि काम गर्यो। जे भए पनि, यदि तपाईले कार्यहरू गर्नु भयो जस्तो मैले वर्णन गरें भने, यसले काम गर्नु पर्छ। भाग्यमानी!
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन अनुप्रयोगहरू » आईफोन खेलहरू » Xcode को साथ जेल ब्रेक बिना MAME4iOS स्थापना गर्नुहोस्
कागजात को लागी धन्यवाद, अहिले म काममा तल झर्छु
शमूएललाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो, कसरी म libmamearmv7.a अनजिप गर्छु। बेस्टिजिपको साथ म सक्दिन वा यसले मलाई चिन्न सक्दैन। धन्यबाद
नमस्ते समुएल। अनजिप गर्न, अनआर्किभर स्थापना गर्नुहोस् र अरू सबै कुरा बिर्सनुहोस्। मलाई लाग्छ म यो प्रयोग गर्दैछु जबदेखि म म्याक प्रयोग गर्छु र यो असफल हुँदैन।
उत्तम, अनजिपिंग अनुप्रयोगको लागि धन्यवाद, म बेटरजाइपको साथ पागल भएँ।
तपाईंले नयाँको लागि एक चरण थप्नु पर्छ, step चरण। तपाईंले अनुप्रयोग चलाउनको लागि तपाईको खातालाई अनुमति दिन अनिवार्य छ। हस्ताक्षर गरिएको छैन। यो भित्र छ: सेटिंग्स / सामान्य / उपकरण व्यवस्थापन
अब म खेलहरू राख्न म्यानुअल पछ्या छु
के यसले तपाईंको लागि काम गर्यो?
तपाइँ सही हुनुहुन्छ कि मैले त्यसलाई राख्न आवश्यक छ, यदि चेतावनी देखा पर्दैन भने यो अविश्वसनीय विकासकर्ता हुन सक्छ। म यसलाई थप्छु। नोटका लागि धन्यबाद।
हो, सबै ठीक छ। मैले ifunbox को साथ कोठा राखें, म यो आइट्यून्स भन्दा बढी सहज लाग्छ। अब म आईकेडको साथ छु र मनपर्ने सूची राख्दै छु। सबै कुरा पूर्ण, तपाईले चाहानुहुन्छ कि आईप्याडमा मामे हुन चाहन्छु।
पाब्लो, धेरै धेरै धन्यबाद। उत्कृष्ट काम जुन तपाईं गर्नुहुन्छ।
पिको मा जवाफ दिनुहोस्
मैले iexplorer.va उत्तमका साथ रोमहरू राखेको छु
सिजरोलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले तपाईंको जानकारी थपेर ट्यूटोरियल परिमार्जन गरेको छु। नोटका लागि धन्यबाद।
म यसलाई स्वीकार गर्दछु कि एक्सकोड चलाउन तपाईलाई म्याक चाहिन्छ, यो अनुमानित पीसीबाट यसलाई चलाउन सम्भव छैन।
नमस्कार जोस। त्यो सहि छ, Xcode केवल म्याकको लागि उपलब्ध छ।
म "सामान्य" भित्र "उपकरण प्रबन्धन" विकल्प फेला पार्न सक्दिन र यसले कम्पाईल गर्दा यसले मलाई त्रुटि दिन्छ, पहिले मैले "Mame4ios" अनुप्रयोग स्थापना गरेको थियो जुन एप्पलले पछि साईन ईन गरेको थियो, तर म कुनै रोम थप्न सक्दिन। यो, किनकि एप्पलले अब यसलाई हस्ताक्षर गरेन, के म पुरानो .ipa फाइल परिमार्जन गर्न सक्दछु र यसलाई मेरो विकासकर्ता खातामा हस्ताक्षर गर्न सक्छु?
Iakro लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, iakro। यदि यो कम्पाइल गर्न असफल भयो भने, यो स्थापना गरिएको छैन र यदि यो स्थापना गरिएको छैन भने तपाईंले उपकरण व्यवस्थापन प्राप्त गर्नुहुने छैन। के तपाईंले वर्णन गरेको सबै काम गर्नुभयो? के तपाईंसँग विकासकर्ता खाता लि linked्क गरिएको छ, के तपाईं फाईललाई अनजिप गर्नुहुन्छ र सबै कुरा?
एक पटक यो सिर्जना भएपछि .ipa हेराफेरी गर्न सकिँदैन। त्यो मलाई थाहा छैन।
हो, मैले सबै कुराको अनुसरण गरें किनकि यसलाई गलत नहुनु भनेर वर्णन गरिएको थियो, तर यसलाई कम्पाइल गर्दा यसले मलाई त्रुटि दियो, खराब मेच जुन ममलाई फेरि पाउनुपर्दछ। हामीले पर्खनु पर्नेछ र यदि त्यहाँ जेलब्रिया बिना अन्य विधिहरू छन् कि छैनौं। धन्यवाद।
तपाईंले दुई फाईलहरू अनजिप गर्नुपर्नेछ: एउटा हामीले डाउनलोड गरेको हो र अर्को भित्रबाट libmamearmv7.a भनिन्छ। के तपाईंले त्यो पनि अनपिप गर्नुभयो?
यदि मैले यो दुई फाईलहरूसँग गरें भने, मुख्य एक र म भित्र रहेको एउटा।
तार्किक रूपमा, केहि गलत छ, तर यहाँबाट म यो के हो थाहा पाउँदिन। मैले फाइल फेरि डाउनलोड गर्ने प्रयास गरें कि यदि यो गलत भएको छ भने। वा हुनसक्छ तपाईले अनपिप गर्दा केहि बिग्रेको छ। मैले यो दुई पटक गरे र यसले राम्रो काम गर्यो।
नमस्ते, पाब्लो। तपाईको योगदान उत्कृष्ट छ। मसँग म्याक छैन। के यो आईओएसको साथ एक vmware स्थापना गर्न र Xcode भित्र थप्न धेरै गाह्रो छ? एक पटक मैले यो प्राप्त गरें .... के म आइट्यून्ससँग पनि आरओएमएस राख्नको लागि गर्नुपर्छ?
अगाडि बढ्दै छ ... त्यहाँ कसैको लागि आईओएस मा माम्ले कम्पाइल गर्न र यसलाई प्रकाशित गर्न विकल्प छैन, त्यसैले म यसलाई डाउनलोड गर्छु र यसलाई मेरो आईफोनमा स्थापना गर्छु? धेरै धेरै धन्यवाद!
नमस्ते अधिकतम। यो प्रयास गर्नुस् http://www.avoiderrors.net/install-os-x-el-capitan-10-11-final-virtualbox/
यसले मलाई त्रुटि दिन्छ, यो भन्छ कि आईओएस १०.१ अनुकूल छैन मसँग एक्सकोड have छ, कुनै विचारहरू
जन्मबाट प्राप्त भन्यो
त्यहाँ mame को एक अद्यावधिक संस्करण छ कि mfi आदेशहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ github पृष्ठ मा छ
जन्मजातलाई जवाफ दिनुहोस्
भिक्टर डानियल गार्जा भन्यो
म सबै चरणहरू गर्छु तर जब म तीरमा हिर्काउँछु तब मैले यो त्रुटि पाउँछु।
«MAME4IOS file फाइल खोल्न सकिएन किनकि तपाईंसँग यसलाई हेर्ने अनुमति छैन।
तपाईंसँग अनुमति छैन।
अनुमतिहरू हेर्न वा परिवर्तन गर्नका लागि, खोजीकर्तामा वस्तु छान्नुहोस् र फाईल छनौट गर्नुहोस्> गेट-इनफो।
तर म फाइल फेला पार्न सक्दिन, मलाई मद्दत गर्नुहोस् ... ..
भिक्टर डानियल गरजालाई जवाफ दिनुहोस्
प्रेस अनलक: एकल नम्बरको साथ आईफोन अनलक गर्न ट्वीक
व्हाट्सएपले अब तपाईंलाई आईओएसबाट पीडीएफ कागजातहरू पठाउन अनुमति दिन्छ